‘लकडाउन’ के हो ? उल्लंघन गरे के हुन्छ सजाय ? – Karnalikhabar
‘लकडाउन’ के हो ? उल्लंघन गरे के हुन्छ सजाय ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण रोक्न नेपालले पनि देशभर ‘लकडाउन’ गरेको छ । आइतबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।सोमबार बेलुका अर्थ, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णयको बारेमा जानकारी गराएका हुन् ।
के हो त ‘लकडाउन’ ? ‘लकडाउन’मा के हुन्छ ?
‘लकडाउन’ नेपालीका लागि नयाँ शब्द हो । यसअघि नेपालमा कहिले पनि ‘लकडाउन’ गर्नुपरेको थिएन । संघीय सरकारले मंगलबार बिहानैदेखि ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको थियो । सरकारले एक्कासी गरेको लकडाउनका बारेमा कतिपय सरकारी अधिकारीहरु पनि ‘लकडाउन’मा के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
“हामीले कसरी भन्नु, यो नेपालका लागि नयाँ विषय हो,” गृह मन्त्रालयको तयारीका सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा गृहका एक उच्च अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “‘लकडाउन’ मा के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयको खाका स्वास्थ्य मन्त्रालय या उच्चस्तरीय समितिले नै गर्ला ।” जानकारहरुका अनुसार यो कानुनी भन्दा पनि जनताकै हितमा सरकारले लिएको निर्णय हो । जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्ने, अत्यावश्यकबाहेक घरबाट बाहिर ननिस्कने, कतै नजाने, कसैसँग भेटघाट नहोस् भन्नका लागि नै ‘लकडाउन’ गरिएको हो ।
के हुन्छ त ?
नेपाल प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार ‘लकडाउन’ प्रहरीका लागि पनि नयाँ हो । तर सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने दायित्व आफूहरूको भएको बताए । “हामीले आपतकालीन सेवाबाहेकका सेवा सञ्चालन नगर्नुस् भनेर आग्रह गरेका छौं,” ती प्रहरी अधिकारीले भने, “यो एक खालको कर्फ्युजस्तै भए पनि त्यस्तो अवस्था भने होइन ।
यसमा हामीले बल प्रयोग गर्न मिल्दैन । हामीले विश्वमा फैलिएको महामारीले तपाईँलाई पनि असर गर्न सक्छ । त्यसैले बाहिर ननिस्कनुस्, घरभित्रै बस्नुस्, अनावश्यक भेटघाट नगर्नुस् भनेर सम्झाउने मात्रै हो । घरबाहिर निस्कनेलाई कारवाही नै गर्न भने मिल्दैन । यसमा पक्राउ गर्ने र कानुनी उपचार खोज्ने भन्ने पनि हुँदैन ।”
सरकारले लकडाउनका बारेमा ८ बुँदामा यस्तो भनेको छ
१–औषधि उपचार, खाद्य वस्तु, खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर ननिस्कने
२–अनुमति प्राप्त सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने बाहेकका सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने
३–सुरक्षा निकायबाट प्रयोग हुने वायुयान र तोकिएका अन्य उडानहरुबाहेक अन्य सबै आन्तरिक व्यवसायिक उडानहरु बन्द गर्ने
४–स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दुध, विद्युत, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला, व्यवस्थापनजस्ता अति आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु मात्र उपस्थित हुने व्यवस्था गरी अन्य कर्मचारीहरुलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु मात्र उपस्थित हुने व्यवस्था गरी अन्य कर्मचारीहरुलाई आवश्यक परेको बखत तत्काल उपस्थित हुने गरी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले बिदा दिने
५–औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दुध, इन्धन, उत्पादन गर्नेबाहेक निजी क्षेत्रबाट संचालित अन्य उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउने
६–व्यवसायीले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरुको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने । अभाव देखाइ मूल्यवृद्धि गर्ने वा कालाबजारी, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपुर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कार्यमा उपयोग गर्ने
७–संक्रामक रोग ऐन, २०२ को दफा २ को उपदफा २ बमोजिम जारी यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल राज्यका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सो का लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने
८–संक्रामक रोग ऐन, २०२० अन्तर्गत जारी आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई सोही ऐनबमोजिम सजाय हुने
अघिल्लो - सावधान ! आजबाट नेपाल एक साता लकडाउन, उल्लंघन गरे ६ महिना कैद हुन सक्छ !
कोरोना भाइरस हावामा पनि जीवित रहन सक्छ - पछिल्लो